Xiddigii ugu fiicnaa Faransiiska 2021 oo la shaaciyey… (Yaa ku guuleystay Benzema mise Mbappe?) - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
By admin January 14, 2022 7
(Paris) 14 Jan 2022. Waxaa la shaaciyey laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiicnaa Faransiiska sanadkii tagay ee 2021, taasoo ay si weyn ugu tartameen magacyada saddex ciyaaryahan oo bandhig fiican sameeyay.
Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee waddanka Spain iyo xulka Faransiiska Karim Benzema ayaa ku guuleystay abaalmarinta xidiggii ugu fiicnaa ciyaartoyda kubadda cagta Faransiiska 2021 (Meilleur Joueur Français 2021), abaalmarintan oo ay bixiso majalladda France Football ee la aas aasay 1954-kii.
Benzema ayaa wuxuu ka sare maray xidigga kooxda PSG, Kylian Mbappé oo galay kaalinta 2-aad, halka kaalinta 3-aad uu galay laacibka khadka dhexe ee Kooxda Chelsea ee ka dhisan Ingiriiska, N’Golo Kanté.
Ciyaaryahan Benzema oo loo yaqaanno Abuu Ibraahiim isla markaana 34 jir ah ayaa 2021-kii waxa uu dhaliyay 38 gool, 29 gool oo uu u dhaliyay Real Madrid iyo 9 gool oo uu u dhaliyay xulka Faransiiska.
Macallin Mikel Arteta oo ku dhawaaqay liiska Xiddigaha Arsenal ee kulanka caawa wajahaya Liverpool
Ma ogtahay in xul uu ka fiican yahay xulkeenna Soomaaliya uu ka qeyb-galay isreeb-reebka Koobka Adduunka ee 2022?